ढाड दुख्नेदेखि मुर्छा पर्नेसम्म अचूक औषधि कपुरको फाइदै फाइदा - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it किन आउँछ डकार ? जानीराखौँ यसका कारण र बच्ने उपाय
Up Next मासु खानु हुदैछ ? सावधान ! मासु खानु अघि यी कुरामा अवश्य ध्यान दिनुहोला
पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको…